ရင်ထဲဆို့မိသွားခဲ့ရတဲ့ မြင်ကွင်းတစ်ခု - YomaLan
ဒီမနက် မနက်စာ ခေါက် ဆွဲ သွား စား ရင်းနဲ့ မထင်မှတ်တယ့် မြင်ကွင်းလေး တစ်ခု ကြောင့် ရင် ထဲ ဆို့ မိသွား ခဲ့တယ်.
ဆိုင်ထဲ သား အမိ၂ ယောက်ဝင်လာတယ်.. သူ့သမီးလေးက ဆိုင် ထဲ ၀င် လာတည်းက အမေ သမီး အများ ကြီးစား ချင်တယ်နော်လို့ ပြော ပြီး ၀င်လာ ခဲ့တယ်.. တကယ်စားတော့ ပွဲသေးတစ်ပွဲ ကို တစ်ယောက် မျက် နှာတစ်ယောက် ကြည့် ပြီး တိတ်တ်ိတ် ဆိပ်ဆိပ်လေးစားနေကြတယ်..
ကလေးလေးက မေမေသမီး ၀က် ခေါက်စား ချင်တယ် ပြောတော့ သူ့ အမေက မစာ…း ပါ နဲ့ သမီးရယ် ၀က် ခေါက် တစ် ထုပ် တန်ဖိုးက ထမင်းဖြူတစ်ပွဲ ၀ယ် လို့ ရတယ်တယ့် .ကျွန်တော် ဘယ်လိုမှမျိုမကျ နိုင်တော့ဘူး.. ကိုယ့် စားမယ့် ၀က် ခေါက် ထုတ်လေး တွေဝက်သား ချဉ်လေး တွေ ကို ကလေးလေး ကိုသွား ပေး ပြီး ထ ထွက် ခဲ့မိတယ်..
ခု ထိ ရင် ထဲ ကျန်နေတယ်.. ငါဖြေရှင်းပေး လိုက်တယ့် ၀က် ခေါက်တစ် ထုပ် က သူ့ တစ်မ နက်စာ ကို ပဲ လုံ လောက်သွား စေ နိုင်တယ်.. သူ့တစ်ဘ၀လုံး ၀က် ခေါက်စား နိုင်ဖို့ ဆို သူပညာ တတ်မှ ပိုက်ဆံ ရှာ နိုင် မှ ကောင်းကောင်းစား နိုင်မယ် ဆိုတာပဲ
ကျွန်တော် တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မနက်စာ ၁ထောင် အတွက် ခက်ခဲ နေတယ့်သူ တွေ ရှိနေတယ် .. ကျွန်တော်တို့တွေကတော့ ဆိုင် ဆို အကောင်း ဆုံး ဆိုင်ပဲ ထိုင် ချင်တယ်.. စားရင် အရသာ အရှိဆုံး ပဲ စား နေကြပေမယ့် ထမင်း တစ်နပ် အတွက် ခက် ခဲ နေကြတယ့် ကလေးလေး တွေ မိသားစု တွေ မြန်မာနိုင် ငံ မှာ အများ ကြီး ဗျ
Credit: Mg Htet Myat
ဒီမနကျ မနကျစာ ခေါကျ ဆှဲ သှား စား ရငျးနဲ့ မထငျမှတျတယျ့ မွငျကှငျးလေး တဈခု ကွောငျ့ ရငျ ထဲ ဆို့ မိသှား ခဲ့တယျ.
ဆိုငျထဲ သား အမိ၂ ယောကျဝငျလာတယျ.. သူ့သမီးလေးက ဆိုငျ ထဲ ဝငျ လာတညျးက အမေ သမီး အမြား ကွီးစား ခငျြတယျနျောလို့ ပွော ပွီး ဝငျလာ ခဲ့တယျ.. တကယျစားတော့ ပှဲသေးတဈပှဲ ကို တဈယောကျ မကျြ နှာတဈယောကျ ကွညျ့ ပွီး တိတျတျိတျ ဆိပျဆိပျလေးစားနကွေတယျ..
ကလေးလေးက မမေသေမီး ဝကျ ခေါကျစား ခငျြတယျ ပွောတော့ သူ့ အမကေ မစာ…း ပါ နဲ့ သမီးရယျ ဝကျ ခေါကျ တဈ ထုပျ တနျဖိုးက ထမငျးဖွူတဈပှဲ ဝယျ လို့ ရတယျတယျ့ .ကြှနျတျော ဘယျလိုမှမြိုမကြ နိုငျတော့ဘူး.. ကိုယျ့ စားမယျ့ ဝကျ ခေါကျ ထုတျလေး တှဝေကျသား ခဉျြလေး တှေ ကို ကလေးလေး ကိုသှား ပေး ပွီး ထ ထှကျ ခဲ့မိတယျ..
ခု ထိ ရငျ ထဲ ကနျြနတေယျ.. ငါဖွရှေငျးပေး လိုကျတယျ့ ဝကျ ခေါကျတဈ ထုပျ က သူ့ တဈမ နကျစာ ကို ပဲ လုံ လောကျသှား စေ နျိုငျတယျ.. သူ့တဈဘဝလုံး ဝကျ ခေါကျစား နိုငျဖို့ ဆို သူပညာ တတျမှ ပိုကျဆံ ရှာ နိုငျ မှ ကောငျးကောငျးစား နိုငျမယျ ဆိုတာပဲ
ကြှနျတျော တို့ပတျဝနျးကငျြမှာ မနကျစာ ၁ထောငျ အတှကျ ခကျခဲ နတေယျ့သူ တှေ ရှိနတေယျ .. ကြှနျတျောတို့တှကေတော့ ဆိုငျ ဆို အကောငျး ဆုံး ဆိုငျပဲ ထိုငျ ခငျြတယျ.. စားရငျ အရသာ အရှိဆုံး ပဲ စား နကွေပမေယျ့ ထမငျး တဈနပျ အတှကျ ခကျ ခဲ နကွေတယျ့ ကလေးလေး တှေ မိသားစု တှေ မွနျမာနိုငျ ငံ မှာ အမြား ကွီး ဗြ